Amụma nzuzo - ESTAmerica US ESTING E-Filing Traveling Services
Anyị Na-enye Onyinye 100% Ego Akwụghachi Ego.
Anyị na-enyocha ihe niile E-File tupu ha eziga ha na Ngalaba Nchịkwa United States. Ọ bụrụ na anyị ahụ nsogbu, anyị na-akpọtụrụ gị site na ozi kọntaktị gị na ngwa gị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnweta akwụkwọ njem US ESTA, anyị na-enye gị nkwụghachi.
Banyere ebe nrụọrụ weebụ a
Ejikwa ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọrụ na ozi a na-enye bụ iji nyere ndị njem aka maka ikike njem (ESTA) ịga leta USA. A na-amarakwa ikike ikike njem dịka e-Visa ma ọ bụ ikike njem njem eletriki. Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka ebumnuche nke inweta ozi na / ma ọ bụ rịọ enyemaka na itinye maka ikikere njem, ị na-akwado nkwenye nke Usoro Nzuzo anyị. A ga-emelite usoro a ma nyochaa kwa oge iji gosipụta mgbanwe ọhụrụ anyị na otu anyị si anakọta ma dezie data. Anyị na-agwa ndị ọbịa niile ka ha nyochaa fon anyị mgbe ị na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Ozi anyị na-anakọta
Anyị na-anakọta ozi nke enyere onwe anyị site na ozi-e ma ọ bụ site na ngwa ngwa a na-enye na saịtị weebụ a. Ị kwenye na nhazi data site na ịkpọtụrụ anyị, ma ọ bụ site n'ịzụta ọrụ anyị. Mgbe ị na-eziga ozi-e ma ọ bụ mezue zụọ, ị na-ahapụ anyị ka ị dezie data gị iji nye nzaghachi ma mezue ọrụ a na-enye. A ga - eji ozi ị nyere nye aka ma nyezie ngwa ahụ. Ụlọ ọrụ anyị agaghị eji data natara maka ebumnuche ọ bụla ọ gwụla ma iwu achọrọ ime ya. A ga-ehichapụ ozi gị site na nchekwa data anyị ma ọ bụrụ na ejighịzi mkpa achọrọ iji nye ọrụ ndị ahịa dị mma.
Ntube njide data
Ebumnuche nke Nkọwapụta Data a bụ ịkọwa data anyị natara, ogologo oge ka echekwara data wee ehichapụ ya. Iji mee ka ụlọ ọrụ anyị nyochaa ma dezie ikike njem njem US, anyị kwesịrị ịrịọ ụfọdụ data n'aka ndị ahịa niile. Ihe atụ nke data nke a ghaghị idobere gụnyere njem njem, ozi gbasara ọrụ, aha, adreesị, na nkọwa ịkwụ ụgwọ. Na-enweghị usoro mmanye agwụla, ọ gaghị ekwe anyị omume ịhazi ikikere njem ọ bụla. Anyị na-edebe data maka oge ọ bụla dị mkpa iji nye ọrụ ahịa ndị magburu onwe ya ma mezue ọrụ ngwa ESTA. A na-ehichapụ ozi ịntanetị na ngwa ngwa otu ugboro. Enweghị ike ịkekọrịta data na ụlọ ọrụ ọ bụla maka ihe azụmahịa.
Arịrịọ ka wepu data nkeonwe
Ị nwere ike ịrịọ na edere na anyị wepu ozi nkeonwe e nyere anyị dịka akụkụ nke ngwa ahụ site na ịkpọtụrụ ngalaba ọrụ ndị ahịa anyị: info@ESTAmerica.org. Mgbe ị na-anata arịrịọ iwepụ, a ga-eme ka email gị na aha gị kwenye na data ahụ. Mgbe ị kwadoro njirimara gị ma ọ bụ ndị ị na-arịọ ka ha wepụ na nnọchite nke, ozi nkeonwe ga-ehichapụ. Ị ga-enweta nzaghachi ozugbo nhichapụ ya.
Ka anyị wee nye ọrụ ndị a na-enye na saịtị weebụ a, a na-edebere ozi nkeonwe gị na usoro kọmputa nke US maka ikike njem (ESTA). Anyị anaghị eso ụlọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ onye ọzọ kerịta data gị maka ihe ọ bụla, ọ gwụla ma iwu achọrọ ka iwu mee nke a site na iji nlezianya ma ọ bụ ikpe ụlọikpe.
Njikọ na ngalaba mpụga
Anyị na-agụnye njikọ nke weebụsaịtị wepụtara iji nyekwuo ozi gbasara ụlọ ọrụ ahụ ma webata weebụsaịtị nwere ike ịmasị. Eziokwu na anyị na-enye njikọ ndị a apụtaghị na anyị kwadoro ma ọ bụ kwado ọdịnaya, ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị nrụọrụ weebụ ahụ na-enye. Ị ga - ahọrọ ịgbaso njikọ ndị ọzọ, anyị enweghị ike ịdabere maka ụzọ ị nwere ike isi jiri saịtị ndị ahụ, ma ọ bụ maka ọdịnaya ọ bụla ha gụnyere. Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọ bụla na-eweta ọrụ, anyị na-atụ aro ka ị gụọ okwu na ọnọdụ ha nke ọma. Ihe data ị na-ahọrọ iji aka gị nye njikọ na mpụga karịrị anyị. Otú ọ dị, anyị na-eme mgbalị ọ bụla iji hụ na weebụsaịtị ndị ahụ emebighị iwu ọ bụla.
Njikọ sitere na ngalaba mpụga
Ndị ọbịa nwere ike ịbịaru na ebe nrụọrụ weebụ anyị site na njikọ ndị ọzọ nyere, nke ụlọ ọrụ anyị anaghị achịkwa. Ọ gaghị ekwe omume na-eduzi nyocha ọ bụla na-adịgide adịgide banyere ọnọdụ nke weebụsaịtị ndị ọzọ, ọ gaghị abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịtụ anya na anyị ga-eme ya. Enweghị ike ịtụ anyị ụgwọ maka ụzọ ndị ọzọ esi eji ma ọ bụ ọdịnaya ha. Anyị na-akwado ka ndị ọbịa niile gụọ ụdị ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nke ọma tupu ịhọrọ ịga n'ihu nchọgharị ma ọ bụ zụta ọrụ / ngwaahịa.
Anyị na-eji http HTTP n'elu SSL (Secure Socket Layer / HTTPS) iji hụ na ọ ga-ekwe omume nchebe maka ịnyefe data site na ebe nrụọrụ weebụ anyị. SSL na-enye ndị ọbịa ohere ịbanye ozi nkeonwe ma kwụọ ụgwọ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ. Ị ga-ahụ ebe nrụọrụ weebụ na-egosipụta nanị HTTP karịa HTTPS na ngalaba adreesị nke ihe nchọgharị gị, anyị na-akwado gị ka ị ghara itinye nkọwa ma ọ bụ ozi nkeonwe ọ bụla.
Ntuziaka na nzuzo na GDPR
Anyị na-agbaso ntụziaka 2002 / 58 / EC nke Ụlọikpe European na Council nke 12 July, 2002, na Nzube Nchekwa Data General (GDPR) (EU) 2016 / 679, nke na-akọwapụta ihe ndị chọrọ maka azụmahịa banyere nchebe nzuzo ndị ahịa na ụdị nke a na-ahazi data nkeonwe.
Gbanwee na N'uba
Anyị debere ikike iji melite ma gbanwee Nzuzo Nzuzo a n'oge ọ bụla mgbe ọnọdụ chọrọ. Anyị na-akwado ndị ọbịa niile ka ha nyochaa usoro iwu anyị maka mgbanwe. Ụbọchị nke mgbanwe ọhụrụ ga-apụta na akuku ala nke ibe a.
Nlekọta akụkọ ikpeazụ: 03 / 04 / 2019
Usoro Electronic maka ikike njem
Malite njem gị na oge 72
NKWU AHỤ nyocha ngwa ngwa